रुसमा बस्ने एक नेपालीले लिए कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन | Nagarik News - Nepal Republic Media
रुसमा बस्ने एक नेपालीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बिरुद्ध रुसले बनाएको भ्याक्सिन लिएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार मस्कोमा कार्यरत ६१ वर्षीय डा. महेश श्रेष्ठले शनिबार कोराना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सिन लगाएर परीक्षणमा सहभागि भएका हुन्।
नेपालको सल्यान पुर्खौली घर भएका श्रेष्ठको नाम रसियन सरकारद्धारा अनलाइनमा लक्की ड्र मार्फत छानिएको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा ३० हजार जनालाई भ्याक्सिन दिने घोषणा गरेको थियो। उनी त्यसै मध्येबाट छानिएको डा. केसीले बताए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७७ २२:०७ शनिबार